Kobo Aura One ကို ၂၀၁၇ အထိမရောက်ရှိနိုင်သေးပါ။ | eReaders အားလုံး
Kobo Aura One ကို (၂၀၁၇) အထိရောက်မည်မဟုတ်ပါ
လက်ရှိစျေးကွက်တွင်ရှိသည့် Premium eReaders အားလုံးသည်တူညီသောအားနည်းချက်ရှိသည်။ သူတို့အရမ်းစျေးကြီးတယ်။ သို့သော်ဤအားနည်းချက်ရှိသော်လည်းအစီရင်ခံစာများအားလုံးကထိုအရာကိုအကြံပြုသည် ဒီပစ္စည်းတွေဟာစင်ပေါ်မှာမရှိတော့ဘူး နှင့်သူတို့ကိုရောင်းသောသူတို့၏စတိုးဆိုင်များတွင်။ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်သူများကိုသူတို့ထင်ထားသလောက်မများသောကြောင့်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။
Kindle Oasis ကိစ္စတွင် eReader ကိုတဖြည်းဖြည်းအစားထိုးနေရာယူပြီးအစားထိုးသည် Kobo Aura One နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်.
အမျိုးမျိုးသောအရင်းအမြစ်များအရ, Kobo Aura One 2017 အထိတိုင်အောင်စင်ပေါ်ပြန်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, များစွာသောလူတွေကဒီဖန်သားပြင်နဲ့ပရီမီယံ eReader မရှိသောရိုးရှင်းသောအချက်ကိုနောင်တရနေကြသည်။ သို့သော်အခြားရွေးချယ်စရာများနီးပါးကဲ့သို့ကောင်းသောရှိပါတယ်။ ထိုအထဲမှအကျော်ကြားဆုံးမှာ ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်သည် Kobo H2Oစတိုးဆိုင်များစွာတွင်တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းကိုအချို့သောစတိုးဆိုင်များတွင်တွေ့နိုင်ပြီး ၇ လက်မအရွယ် screen ပါသည့် eReader ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောဈေးနှုန်းထက် eBay ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များတွင်.
ဤစက်၏အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာကြီးမားသောမျက်နှာပြင်မော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည် မျက်နှာပြင် ၁၃ လက်မကျော်ရှိသည့် eReader တစ်ခုဖြစ်သည့် Onyx Boox Max။ သို့သော်ဤစက်၏စျေးနှုန်းသည်ပုံမှန်ထက်မြင့်သည်။ အကယ်၍ မျက်နှာပြင်သည်သင့်အတွက်ပြisနာမဟုတ်ပါက Kobo Aura Edition2နှင့် Kobo Glo HD မော်ဒယ်များသည် Amazon မှပစ္စည်းများကိုမလိုချင်သောသို့မဟုတ်ဤထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်မတတ်နိုင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုနှစ်ခုဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤခရစ်စမတ်သည်အမှန်ပင် ကျနော်တို့ Kobo Aura One ၏မည်သည့်ယူနစ်ကိုမဆိုကြည့်ပါအမှန်တကယ်ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိဤ eReader အမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ Kobo Aura One ရောက်ရင် ၀ ယ်လိုအားရှိသလား။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » Kobo Aura One ကို (၂၀၁၇) အထိရောက်မည်မဟုတ်ပါ
သင့်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ KOBO တွင်စပိန်၌နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြောင်းကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်၏ KOBO ကို (ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စကဲ့သို့) ၀ ယ်သောအခါသူတို့သည်အာမခံသည်ယူရို ၃ ဒင်္ဂါးနှင့်တူညီသည်ဟုဆိုကြသည်
York မြို့ ဟုသူကပြောသည်
ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို Media markt တွင်သိုထားရှိသည်။ ပျက်စီးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်သည် ၂ နှစ်အာမခံကာလအတွင်း၎င်းကိုလူကိုယ်တိုင်ပေးပို့နိုင်သည်။ သို့သော်အလားအလာအရ Fnac တွင်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ပါကကျွန်ုပ်မသိပါ။ fnac အွန်လိုင်းကငါ့ကိုအတူတူပဲအာမခံထားလား။
ကောင်းပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တယ်၊ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့သင်ဝဘ်ကနေလုပ်ရမယ်။
ဖာနန်ဒို Valls Marti ဟုသူကပြောသည်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များတွင်မရှိသောအာမခံချက်များရှိပါသလား။ ငါဆိုသည်ကား၊ သင် ၀ ယ်ထားသောအရာကို ၀ ယ်ပါ။ Geek world မှ ၀ ယ်ပါ။ အိုင်ယာလန်၊ ဟန်ဂေရီစသည်ဖြင့်ပြုပြင်သည်။ သင်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ပြိုကွဲမှုကိုဖွင့်လိုက်သည်၊ ယင်းသည်သူတို့အတွက်ရောက်လာပြီးသုံးရက်အတွင်းသင်ပြန်လည်ရရှိသည်။
Fernando Valls Marti အားပြန်ကြားပါ
ငါကအဲဒါကိုဘာစီလိုနာမှာရှိတဲ့ La Central စာအုပ်ဆိုင်မှာဝယ်ခဲ့တယ်။ ပထမနှစ်အတွင်းပြofနာဖြစ်ရင်သူတို့ကအစားထိုးလိုက်တယ်။
ပျက်ဆီးမှုကြောင့်ကျွန်ုပ် Glo HD ကို mediamarkt သို့ပို့လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဒါဟာအာမခံအတွင်း၌ရှိ၏နှင့်စိုစွတ်သောဘာမျှမ။ တစ်ပတ်မပြည့်ခင်မှာသူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပိုက်ဆံပြန်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်စက်ကိုမပြောင်းနိုင်ဘူး။
Amazon Marketing Services၊ အချို့သောစာရေးဆရာများအတွက် Amazon ဝန်ဆောင်မှုအသစ်